Bible Mu Nsɛm Hyɛn no Bɔ Supɔw Bi So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HWƐ! hyɛn no ho akã! Ɛrebubu kogyoo! Wuhu nnipa a wɔahuruw agu nsu no mu no? Ebinom adu mpoano dedaw. So Paulo na ɔwɔ hɔ no? Ma yɛnhwɛ nea aba no so.
Kae sɛ bɛyɛ mfe abien no na Paulo da afiase wɔ Kaesarea. Na afei wɔde ɔne nneduafo afoforo guu hyɛn mu, a na wɔde wɔn rekɔ Roma. Bere a wotwaa Kreta supɔw no ho no, ahum kɛse bi tui. Ano yɛɛ den araa ma na wontumi nyɛ hwee. Na wontumi nhu owia adekyee, na wonhu nsoromma no nso anadwo. Nna dodow bi akyi no, hyɛn no mufo nyinaa hui sɛ wobewuwu.
Afei Paulo sɔree na ɔkae sɛ: ‘Mo mu biara renwu; hyɛn no nkutoo na ɛbɛbɔ. Efisɛ Onyankopɔn bɔfo baa me nkyɛn anadwo no bɛkae sɛ, “Nsuro, Paulo! Ɛsɛ sɛ wugyina Roma sodifo Kaesare anim. Na Onyankopɔn begye wɔn a wɔka wo ho wɔ hyɛn no mu no nyinaa nkwa.”’
Ahum no fii ase no da a ɛto so 14 anadwo no, hyɛn no mu adwumayɛfo hui sɛ nsu no mu nnɔ pii bio! Esiane sɛ na wosuro sɛ wɔbɛkɔ akɔpem ɔbotan bi nti, wogyinae. Ade kyee no wohuu asase. Wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔde hyɛn no bɛbɛn mpoano hɔ.
Na bere a wɔrebɛn mpoano no, hyɛn no kɔkaa anhwea mu. Asorɔkye no fii ase sɛ ebu gu so, na hyɛn no fii ase bubui. Ɔsraani panyin a ɔwɔ mu no kae sɛ: ‘Wɔn a wonim aguare nyinaa nni kan mfi hyɛn no mu nkɔ mpoano. Na wɔn a wonnim aguare no nso mmutubutuw ntaboo ne hyɛn no mu nnua asinasin no bi so nni wɔn akyi.’ Wɔyɛɛ saa. Saa kwan yi so no nnipa 276 a na wɔwɔ hyɛn no mu nyinaa nyaa nkwa, sɛnea ɔbɔfo no hyɛɛ bɔ no.
Ná wɔfrɛ supɔw no Malta. Na nnipa a wɔwɔ hɔ no yam ye, na wɔhwɛɛ wɔn a na wɔwɔ hyɛn no mu no. Bere a wim yɛɛ yiye no, wɔde Paulo faa hyɛn foforo kɔɔ Roma.
Asomafo Nnwuma 27:1-44; 28:1-14.
Dɛn na ɛbaa hyɛn a Paulo te mu no so bere a wotwaa Kreta supɔw no ho no?
Dɛn na Paulo ka kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ hyɛn no mu no?
Ɛyɛɛ dɛn na hyɛn no bubui?
Akwankyerɛ bɛn na ɔsraani panyin no de mae, na nnipa baahe na woduu mpoano dwoodwoo?
Dɛn ne supɔw a wogyinaa so no din, na dɛn na wɔyɛɛ Paulo bere a wim yɛɛ yiye no?
Kenkan Asomafo Nnwuma 27:1-44.
Sɛ yɛkenkan Paulo Roma akwantu no ho nsɛm a, ɔkwan bɛn so na ɛma ahotoso a yɛwɔ sɛ Bible mu nsɛm yɛ nokware no mu yɛ den? (Aso. 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)
Kenkan Asomafo Nnwuma 28:1-14.
Sɛ Malta sotefo a wɔyɛ abosonsomfo mpo nyaa atenka yɛɛ Paulo ne n’ahokafo a wɔwɔ hyɛn a abɔ no mu “adɔe a ɛnka” a, atenka bɛn na ɛsɛ sɛ Kristofo nya de yɛ ade ma afoforo; na ne titiriw no, wɔ tebea bɛn mu? (Aso. 28:1, 2; Heb. 13:1, 2; 1 Pet. 4:9)